Hadda waxaad toos uga baahin kartaa barnaamijkaaga 'GoPro' iyada oo loo marayo Periscope | Wararka IPhone
Kuwa ugu fiican ee Periscope iyo GoPro waxay ku yimaadaan gacmaheena: wixii hada ka dambeeya waan qaban karnaa idaacadaha toos looga sii daayo Periscope adoo adeegsanaya Kaamirooyinka GoPro. Dabcan, aaladdan waxaa loo heli doonaa oo keliya moodeellada ugu dambeeya ee moodeellada xilligan la joogo: GoPro HERO4 Black iyo HERO4 Silver. Sidaa darteed, laga bilaabo hadda waxaan go'aansan karnaa haddii aan dooneyno inaan ka sii daayo kamaradda iPhone ama isticmaalno GoPro-ga, oo ku habboon kuwa jecel cayaaraha ba'an.
Dhammaan xulashooyinkaan waxaa laga heli karaa App-ka Periscope ee loogu talagalay iPhone, taas oo noo oggolaan doonta inaan dooranno kamarad. Waqtigan xaadirka ah, Periscope wuxuu leeyahay in kabadan toban milyan oo isticmaaleyaal ah adduunka oo dhan, sidaa darteed helitaanka waxyaabo cusub oo xiiso leh ayaa aad u fududaan doonta wixii hadda ka dambeeya. Isticmaalayaasha waxay ka arki karaan quluubta iyo sheekaysiga shaashadda taleefanka.
Toddobaadkii hore Twitter wuxuu bilaabay inuu si toos ah u dhexgalo Periscope ayaa si toos ah u tabinaya, taas oo macnaheedu yahay in kuwa raacsan shabakada bulshada ay awoodi doonaan inay si toos ah ugala socdaan barnaamijyada GoPro waqtiga Twitter-ka.
Haddii aad haysatid barnaamijka Periscope ee lagu rakibay iPhone-kaaga, kan aqoonsan doonaa GoPrama isla marka aad ku xirto telefoonka. Markaad furto Periscope, waxaad heli doontaa batoon aad ku doorato kamaradda. Dhammaan baahinta aad sameyso waxaa lagu duubi doonaa kaarka SD GoPro.
Waqtigaan la joogo, tani waa ikhtiyaar si gaar ah loogu talagalay iPhone.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Hadda waxaad toos uga baahin kartaa barnaamijkaaga 'GoPro' iyada oo loo marayo Periscope
IPhone 7 Plus wuxuu lahaan karaa laba kamaradood iyo indho indheyn